လှပလွန်းတဲ့ သူမရဲ့အလှတရားတွေပေါ်လွင်အောင် ပြသထားတဲ့ မတ်မတ်သင်ဇာရဲ့ အလန်းစားဗီဒီယိုလေး – Online News Post
လှပလွန်းတဲ့ သူမရဲ့အလှတရားတွေပေါ်လွင်အောင် ပြသထားတဲ့ မတ်မတ်သင်ဇာရဲ့ အလန်းစားဗီဒီယိုလေး
အမိုက်စား ကောက်ကြောင်း အလှ ပိုင်ရှင် သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး ချောလေး သင်ဇာဝင့်ကျော် ကတော့ ကျစ်လစ် သွယ်လျ လှပတဲ့ ဘော်ဒီလေး ကြောင့် ပုရိသ တွေရဲ့ အလေး ပေး ဝ န်းရံ ခြင်းကို သိမ်းပိုက် ရရှိထားသူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ သင်ဇာဟာ ဆက်ဆီ Model အဖြစ်နဲ့ ပါ Photo Shooting တွေ နဲ့ ကြော်ငြာပေါင်း များစွာ ကို လက်ခံ ရိုက် ကူး ပေးနေ ရသူလည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ မြန်မာဆန်ဆန်လေး တွေနဲ့ သာမက ခေတ်ရှေ့ပြေး တဲ့ ဖက်ရှင်တွေ ဝတ်ဆင် တဲ့ အခါမှာ လည်း မိန်းကလေးချင်း တောင် ငေးမောရ လောက်အောင် ဆွဲ ဆောင်မှု အပြည့်ရှိနေသူ လေး လည်း ဖြစ်ပါ တယ် … .
သင်ဇာ့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှု တွေတိုင်းကို လည်း ပရိသတ် တွေ သိရှိရ အောင် ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း ချပြလေ့ ရှိတာလည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ ဒီကနေ့မှာ လည်း ကြော်ငြာလေး တစ်ခု ရိုက်ကူးနေရတာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ မကြာသေး ခင် နာရီပိုင်း လောက်ကတော့ သင်ဇာရဲ့ ဓာတ်ပုံ ဆရာဖြစ် တဲ့ ကိုနေမင်းထွန်းရဲ့ Facebook Story မှာ ဗီဒီယို လေးတစ် ခု တင်ထား တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။
ဒါက တော့ ဖြူဖွေးဝင်းဥ နေတဲ့ သဘာဝအလှ တရားတွေကို သိသာ ထင်ရှားစွာ မြင်နေ ရတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယို လေးပဲ ဖြစ်ပါ တယ် ။ သင်ဇာကတော့ တစ် နေ့ ထက်တစ်နေ့ ပုရိသတွေ ကို သူမရဲ့ အလှ တရားတွေနဲ့ ညှို့ယူ ဖမ်းစားထား နေတာလည်း ဖြစ် ပါတယ် ။ ပရိသတ်တွေ လည်း ကြည့်ရှု ခံစားနိုင်အောင် သင်ဇာဝင့်ကျော် ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်လေး ကို တစ်ဆ င့် ပြန် လည် ကူးယူတင်ဆက်ပေး လိုက် ရပါတယ် နော် … .
source and photo crd : Nay Min Tun ’ s and Thinzar Wint Kyaw ’ s Facebook Account
အမိုက္စား ေကာက္ေၾကာင္း အလွ ပိုင္ရွင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီး ေခ်ာေလး သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ ကေတာ့ က်စ္လစ္ သြယ္လ် လွပတဲ့ ေဘာ္ဒီေလး ေၾကာင့္ ပုရိသ ေတြရဲ့ အေလး ေပး ဝ န္းရံ ျခင္းကို သိမ္းပိုက္ ရရွိထားသူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။ သင္ဇာဟာ ဆက္ဆီ Model အျဖစ္နဲ႔ ပါ Photo Shooting ေတြ နဲ႔ ေၾကာ္ျငာေပါင္း မ်ားစြာ ကို လက္ခံ ရိုက္ ကူး ေပးေန ရသူလည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ျမန္မာဆန္ဆန္ေလး ေတြနဲ႔ သာမက ေခတ္ေရွ႕ေျပး တဲ့ ဖက္ရွင္ေတြ ဝတ္ဆင္ တဲ့ အခါမွာ လည္း မိန္းကေလးခ်င္း ေတာင္ ေငးေမာရ ေလာက္ေအာင္ ဆြဲ ေဆာင္မႈ အျပည့္ရွိေနသူ ေလး လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ … .
သင္ဇာ့ရဲ့ လႈပ္ရွားမႈ ေတြတိုင္းကို လည္း ပရိသတ္ ေတြ သိရွိရ ေအာင္ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ခ်ျပေလ့ ရွိတာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။ ဒီကေန႔မွာ လည္း ေၾကာ္ျငာေလး တစ္ခု ရိုက္ကူးေနရတာ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။ မၾကာေသး ခင္ နာရီပိုင္း ေလာက္ကေတာ့ သင္ဇာရဲ့ ဓာတ္ပုံ ဆရာျဖစ္ တဲ့ ကိုေနမင္းထြန္းရဲ့ Facebook Story မွာ ဗီဒီယို ေလးတစ္ ခု တင္ထား တာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။
ဒါက ေတာ့ ျဖဴေဖြးဝင္းဥ ေနတဲ့ သဘာဝအလွ တရားေတြကို သိသာ ထင္ရွားစြာ ျမင္ေန ရတဲ့ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ ရဲ့ အမိုက္စား ဗီဒီယို ေလးပဲ ျဖစ္ပါ တယ္ ။ သင္ဇာကေတာ့ တစ္ ေန႔ ထက္တစ္ေန႔ ပုရိသေတြ ကို သူမရဲ့ အလွ တရားေတြနဲ႔ ညႇို႔ယူ ဖမ္းစားထား ေနတာလည္း ျဖစ္ ပါတယ္ ။ ပရိသတ္ေတြ လည္း ၾကည့္ရႈ ခံစားနိုင္ေအာင္ သင္ဇာဝင့္ေက်ာ္ ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္ေလး ကို တစ္ဆ င့္ ျပန္ လည္ ကူးယူတင္ဆက္ေပး လိုက္ ရပါတယ္ ေနာ္ … .
Previous post Live လွှင့်ရင်း ဖင်လှန်ပြလိုက်လို့ အမေရဲ့အဆူကို အတော်လေးခံလိုက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကို ပြောပြလိုက်တဲ့ မိုးအောင်ရင်
Next post အချိုးစားကျလွန်းတဲ့ ကိုယ်လုံးလေး ကို အထင်းသားပေါ်လွင်အောင် ဆက်ဆီပို့စ်လေးတွေပေးနေတဲ့ လုလုအောင်ရဲ့ ဗီဒီယို